Wararka – Wasaarada Waxbarashada , Hiddaha & Tacliinta Sare
Wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada XFS.yaa kormeer ku sameyay xarunta diyaarinta xogaha ardayda imtixaanaadka qaranka ee 2018 2019
Wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada Hiddaha iyo tacliinta sare ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Cabdi raxmaan maxamuud cabdulle Jaabir ayaa maanata kormeer ku sameyay xarunta diyaarinta xogaha ardayda imtixaanaadka qaranka ee 2018 2019 kuwaasoo ku yaalla magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka.
Wasiiru dowlaha ayaa waxaa kormeerka ku wehliyay Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada mudane Axmed xasan yuusuf iyo xubno kale oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada.
Wasiiru doowlaha wasaarada waxbarashada XFS, Soomaaliya Cabdi raxmaan maxamuud Cabdulle Jaabir ayaa sheegay in markasta uu waa jib uu ka saranyahay hurumarinta waxbarashada dalka.
,,Maanta waxaan kormeer ku samaayay xarunta diyaarinta ardayda imtixaanaadka qaranka ee 2019 2018 kuwaasoo ku yaalla magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka.
Hadafka kormeerkan waxaa ugu muhiimsan hubinta nidaamka cusub oo loo qaadi doono imtixaanka sannadka kaasoo ka turjuma waqtiga hada la jooga ee casriga waqtigii hore waxaan isticmali jirnay in imtixaanadka loo qaado qaab aan aheyn midka aan hadda soo kordhinay sanadkaan waxaan u diyaara garoobeynaa in aan diiwaan galino 37000 ( Sodon iyo Todobo kun oo ardey) oo jooga qeybaha uu dalku ka kooban yahay waxaa noo qorsheysan imtixaanka uu dhaco isbuuca koowaad ee bisha shanaad ee sannadkan.
Waxaan rajeyneynaa in sannadkan uu ka duwanaan doono sanadkii hore waayo tirade ardayda aad bey u badan tahay sababta keen tana waa nidaamka iyo qorshaha aan u dajinay oo bulshada Soomaaliyeed kalsooni badan ay ku qabaan.
Kormeerkan waxaa igu wehelinayay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Axmed Xasan Yuusuf waxaan sigaar ah ugu mahad celinayaa dhamaan shaqaalaha wasaaradda waxbarashada Hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo markasta u tagan u adeegida shacabka Soomaaliyeed.
Wasiirka waxbarashada XFS oo Cape Town kula kulmay jaaliyadda Soomaaliyeed.
Wasiirka waxbarashada hiddaha iyo taclinta sare ee xukumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulahi Goodax Barre iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan dalka Koonfur Afrika ayaa kulan la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Cape Town.
Kulankan ayaa waxaa inta badan goob joog ka ahaa qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed sida ganacsato, aqoonyahano, siyaasiyiin, ardayda iyo Culumaaudiinka.
Guddoomiyaha jaamacadda Ummadda Maxamed Axmed Jimcaale, danjiraha dowladda Soomaaliya u fadhiya Koonfur Afrika Jamaal Maxamed Barrow iyo xubno ka tirsan wasaaradda waxbarashada ayaa goob joog ka ahaa kulanka.
Mudane Cabdulahi Goodax Barre ayaa xubnaha ka qeyb galay kulanka u sheegay in dalka Koonfur Afrika u yimid sidii iskaashi dhanka horumarinta waxbarashada u yeelan lahayeen dalalka Soomaaliya iyo Koonfur Afrika.
Wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Mudane Cabdulahi Goodax Barre ayaa sheegay in dowladda Koonfur Afrika ay kala hadli doonaan sidii looga hortagi lahaa dhibaatada loo geysto dadka Soomaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika iyo sidii arday Soomaaliyeed ee dalkan ku sugan aqoontooda kor loogu qaadi lahaa.
Mudane Cabdulahi Goodax Barre ayaa inta uu joogo dalka Koonfur Afrika lagu wadaa inuu kulamo kala duwan la qaato madaxda dalkan.
Wasiirka Waxbarashadda Xukuumadda oo Booqday Xarunta Farsamada Gacanta lagu barto ee magaaladda Cape town
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Goodax Barre oo wehliyo Gudoomiyaha Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ayaa maanta booqday College of Cape Town oo ah Xarun lagu barto Xirfadaha Farsamada Gacanta.
Wasiirka ayaa Xaruntaasi kulan kula qatay Madaxda College-ka, waxa ayna kawa hadleen Habka ay u shaqeeyo College of Cape Town iyo Qalabka ay wax ku baraan Dhalinyadda barta Xirfada gacanta.
Maanta waxaan kormeer ku tagay College of Cape Town oo ah mid lagu barto xirafadda farsamada gacanta , waxaan kula kulmay madaxda College-kan wuxuu faah faahin iga siiyay habka ay u shaqeeyaan iyo qalabka ay wax ku baran dhalinyarada barta xirfaddan.
Waxaan ka codsanay inay gacan naga siiyaan sidii dalkeenna looga hirgelin lahaa xarumo casri ah oo lagu barto farsamada gacanta si dhalinyarada Soomaaliyeed uga faa’ideystan.
Wasaaradda waxbarashadda hiddaha iyo tacliinta sare waxaa ka go’an hirgelinta dugsiga farsamada gacanta taasoo sahleysa in shaqo abuur ay helan dhalinyarada Soomaaliyeed.
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka codsaday Maamulka Xaruntaasi in Gacan ay ka siiyo Siddii Soomaaliya looga hirgelin lagaa Xarumo Casri ah oo lagu barto Farsamada gacanta, si dhalinyaradda Soomaaliyeed ay uga faa’iideystaan.
Wasiirka waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in Wasaaradda Waxbarashadda ay ka go’an tahay in dalka laga hirgeliyo Dugsiga farsamada gacanta,si loo soo saaro dad xirfadlayaal.
Wasiiru Dowlaha Wasaaradda waxbarashada oo maamulka Gobalka banaadir kala hadlay horumarinta waxbarashada Gobalka banaadir
Wasiiru dowlaha Wasaaradda waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Cabdi raxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabair ayaa manta kulan laqaatay Xarunta wasaaradda waxbarashada Gudoomiye ku xigeenka arimaha bulshada Gobalka Banaadir Basma Caamir Axmed,Agaasimaha waxbarashada Gobalka Banaadir cabdi naasir rooble iyo Gudoomiyaha horumarinta bilicda Muqdisho Cabdi casiis Goodax.
Kulanka ayaa intii uu socday looga hadlay iskaashiga horumarinta Waxbarashada dugsiyada Gobalka Banaadir iyo sidii gobalka banaadir iyo wasaaradda waxbarashada ay ugu wada shaqeyn lahaayeen .
Gudoomiye ku xigeenka arimaha bulshada gobalka banaadir Marwo Basmo Caamir ayaa soo jeedisay in lagawada qeyb qaato sidii waxbarashada dugsiyada gobalka banadir loo hormarin lahaa iyo in Gobalka banaadir lagu soo wareejiyo dugsiyada Gobalka Banaadir.
Wasiiru dowlaha wasaarada waxabarashada Cabdi raxmaan Maxamuud Cabdulle [Jaabir ayaa waxa uu sheegay in muhiimad gaar ah ay u leedahay bulshada Soomaaliyaad in sare loo qaado waxbarashada dalka gaar ahaan dugsiyada Gobalka banaadir.
Maanta waxaan xafiiskeyga magaalada Muqdisho ku qaabilay guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basmo Caamir Axmed iyo guddoomiyaha horumarinta bilicda gobolka Banaadir Cabdicasiis Goodax BarreAgaasimaha waxbarashada Gobalka banaadir cabdi naasir rooble abuukar.
Waxaan ka wada hadalnay sidii wasaraada waxbarashada iyo maamulka gobolka Banaadir ay iskaga kaashan lahaayeen horumarinta waxbarashada dugsiyadda gobolka Banaadir waxakale oo aan kawada hadalnay sidii maamulka gobalka banaadir ay wasaaradda waxbarashada ay ugu wareen jin laheyda dugsiyada Gobalka banaadir.
Wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa mar walba ka go’an inay ku dadaasho horumarinta waxbarashada dalka si loo helo dhalinyaro leh xirfad ay ku shaqeystan.